လူမှုမီဒီယာအတွက်ကျွန်ုပ်၏အကောင်းဆုံးပုံရိပ်များနှင့်လူမှုအသွားအလာ ၃၀.၉% တိုးမြှင့်ပုံ။ | Martech Zone
တနင်္လာနေ့မတ်လ 1, 2021 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဧပြီ 27, 2022 Douglas Karr
ပြီးခဲ့သည့်နို ၀ င်ဘာလနှောင်းပိုင်းကကျွန်ုပ်၏အကောင်းမြင်မှုကိုစမ်းသပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် ပုံရိပ်တွေ ဘို့ လူမှုမီဒီယာ ဒါကြောင့်မည်သည့်အကျိုးကျေးဇူးရှိလိမ့်မယ်ဆိုပါကကြည့်ရှုရန်။ သင်ဟာစာဖတ်သူတစ်ယောက် (သို့) စာရင်းပေးသွင်းသူတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့ရင်သင်ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်မှုတွေအတွက်ငါ့ site ကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုနေတယ်ဆိုတာမင်းသိတယ်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်မျှဝေထားသောပိုမိုဆွဲဆောင်မှုရှိသောပုံရိပ်ကိုဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ဆောင်းပါး၏ပြင်ဆင်မှုတွင် ၅ မိနစ်သို့မဟုတ် ၁၀ မိနစ်ထပ်တိုးသည်။ သို့မှသာ၎င်းသည်ကြီးမားသောအချိန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဟုတ်ပါ။ သို့သော်မိနစ်ပိုင်းများကအမြဲတမ်းများပြားလာပြီးကျွန်ုပ်၏အချိန်ကိုပညာရှိစွာမြှုပ်နှံကြောင်းသတိပြုရန်လိုသည်။ ကလာသောအခါ Martech Zone.
အရွယ် - ငါ template တစ်ခုတည်ဆောက်ခဲ့သည် Illustrator ရဲ့ 1200px အားဖြင့်ကျယ်ပြန့် 675px အရပ်ရှည်ရှည်။ ပုံတွေကိုဒီအမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးမှာပြသဖို့လည်းငါဆောင်ပုဒ်ကိုပြုပြင်ခဲ့တယ်။
ကုန်အမှတ်တံဆိပ် - ကျွန်ုပ်သည်ဆိုဒ်၏အမည်ကိုမဖော်ပြသော်လည်းကျွန်ုပ်၏ဆိုရှယ်မီဒီယာအသစ်များတွင်အမြဲတမ်းအသိအမှတ်ပြုရန်တံဆိပ်ပါသောတံဆိပ်ပါတကား။
ခေါင်းစဥ် - ကျွန်ုပ်၏ဆောင်းပါးပေါ်ရှိအမှန်တကယ်စာသားနှင့်အမြဲတမ်းကိုက်ညီရန်မလိုအပ်သည့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောခေါင်းစဉ်။ ငါရှာဖွေရေးအတွက် post ခေါင်းစဉ်ပိုကောင်းစေခြင်းငှါပေမယ့်ပိုပြီးကလစ်မောင်းဖို့ကြိုးစားရန်, ငါ့ပုံရိပ်ပေါ်ခေါင်းစဉ်ပြန်ရေး။
image ကို - ကျွန်ုပ်စာရင်းသွင်းထားပါသည် Depositphotos ငါအလွယ်တကူ download လုပ်ပြီးထည့်သွင်းနိုင်သည့်အလွန်ကြီးစွာသောသရုပ်ဖော်ပုံများကိုရှာဖွေရှာပါ။
ငါထို့နောက်သုံးပါ Feedpress ပါ ငါ၏အဆောင်းပါးများကိုငါ၏လူမှုရေးလမ်းကြောင်းများသို့အလိုအလျှောက်ထုတ်ဝေရန်။ ရလဒ်ကတော့တကယ်ထူးခြားတဲ့ tweet တစ်ခု (သို့) Facebook update ဖြစ်တယ်။ ဒီမှာကြည့်ပုံ တွစ်တာ:
ဘယ်လိုဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ကသင့်ရဲ့ရောင်းအားကိုကျွေးမွေးသလဲ https://t.co/QMp6i6aq18 #စျေးကွက် pic.twitter.com/3o1O2D6ssB
- martech zone (@martech_zone) ဖေဖေါ်ဝါရီလ 28, 2021
ထိုအပေါ် LinkedIn တို့:
ခေါင်းစဉ်များကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ရေးသားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ပြီးခဲ့သည့်လအနည်းငယ်ခန့်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်၊ ဗိုင်းရပ်စ်ပို့စ်များကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီးပရိသတ်ကိုအမေရိကန်၊ ကနေဒါ၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၊ နယူးဇီလန်နှင့်သြစတြေးလျနိုင်ငံများသို့ကန့်သတ်ထားသည်။ ရလဒ်များကအလွန်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသည်။
Google Analytics အတွင်းမှာကျွန်တော့်ရဲ့လူမှုမီဒီယာလွှဲပြောင်းမှုများကိုအချိန်ကုန်လွန်စွာဆန်းစစ်လေ့လာခြင်းသည် 30.9% တိုးလာ ကျွန်ုပ်၏ပုံရိပ်များကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်သည့်လူမှုမီဒီယာမှစာမျက်နှာမြင်ကွင်းများတွင်။
စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတာကကျွန်တော်အနည်းဆုံးအချိန်ဖြုန်းခဲ့တဲ့လူမှုမီဒီယာ ... ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာမှာသိသိသာသာတိုးတက်လာတာ ... ၅၉.၄% တိုးတက်မှု။
အားလုံးပြီးပြည့်စုံခြင်းမရှိသေးပါ။ ကျွန်ုပ်၏စာမျက်နှာပေါ်ရှိကျွန်ုပ်၏ပျမ်းမျှအချိန်နှင့်လာရောက်လည်ပတ်သူအသစ်၏စာမျက်နှာများသည် ၁၀% အောက်လျော့နည်းနေသည်ကိုကျွန်ုပ်သတိပြုမိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် visitors ည့်သည်များပိုမိုဆွဲဆောင်နေစဉ်ကျွန်ုပ်သည်ကြီးမားသောအလုပ်ကိုလုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဒီမှာသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်သည်ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုအခြားနည်းလမ်းများဖြင့် ဆက်လက်၍ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်နေသည်။ အထူးသဖြင့်တစ်ပတ်လျှင်ရာနှင့်ချီသောရှေးဟောင်းဆောင်းပါးများကိုဖြတ်သန်းပြီးအချို့ကိုမွမ်းမံခြင်း၊ ဖယ်ရှားခြင်း၊ များစွာသောပြန်ညွှန်းခြင်းနှင့်ဆိုက်၏အလုံးစုံအရည်အသွေးအပေါ်လုပ်ဆောင်ခြင်း။ ငါသည်လည်းတစ်ခုအကောင်အထည်ဖော် အလိုအလျောက်ဘာသာပြန်လုပ်ငန်း အရာမဟုတ်သောအင်္ဂလိပ်စကားပြောနိုင်ငံများမှ visitors ည့်သည်အရေအတွက်မြင့်တက်မြင်ကြပြီ။
ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွက်ရရှိသောကြိုးပမ်းမှုများမှာနှစ်အလိုက်နှစ်အလိုက်စာရင်းဇယားများကြောင့်သိသာထင်ရှားသည့်အကျိုးရလဒ်များရရှိခဲ့သည်။
တိုက်ရိုက်ယာဉ်အသွားအလာ ၅၈.၈၉% တက်လာ
အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှုသည် ၄၁.၁၈% တိုးတက်ခဲ့သည်။
လူမှုမီဒီယာအသွားအလာမှာ ၄၆၉.၇၀% ရှိသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်, ငါ့ site ကိုအကြောင်းကို၎င်း၏အသွားအလာနှစ်ဆရှိပါတယ် ... ငါတော်တော်လေးပျော်ရွှင်မိပါတယ်!
သင်၏ Digital Marketing နှင့်အတူအကူအညီလိုပါသလား။
သင်၏ ၀ ယ်ယူမှုကိုတိုးတက်စေမည့်တိကျသောနည်းဗျူဟာအချို့နှင့်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုစစ်ဆေးလိုပါကကျွန်ုပ်နှင့်ဆက်သွယ်ပါ Highbridge။ ငါမင်းအတွက်စာရင်းစစ်၊ မင်းအဖွဲ့ရဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေပေးနိုင်တယ်၊ မင်းရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရလဒ်တွေကိုတိုးတက်အောင်ကူညီမယ့် ​​၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူတစ်ယောက်တောင်မှငါကိုယ်တိုင်ယူနိုင်တယ်။ သင်အမှန်တကယ်အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီလိုလျှင် WordPress site optimization တွင်ကျွန်ုပ်သည်အလွန်ကျွမ်းကျင်စွာဖြစ်သည်။
ထုတ်ဖော် - ဤဆောင်းပါး၌ ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးအတွက်တွဲဖက်လင့်ခ်များကိုအသုံးပြုသည်။
Tags: ပုံရိပ်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာပုံရိပ်အရွယ်အစားလူမှုမီဒီယာပုံရိပ်တွေလူမှုမီဒီယာ previewsလူမှုမီဒီယာအသွားအလာ